Enwere m ike ịmalitegharịa iPad na enweghị bọtịnụ ike? Ee! Nke a bụ otu. - Iphone
bọtịnụ iphone 6 anaghị arụ ọrụ
apple id anaghị arụ ọrụ na iphone
kọmputa m na -amata iphone m mana itunes adịghị
Enwere m ike ịmalitegharịa iPad na enweghị bọtịnụ ike? Ee! Nke a bụ otu.
Chọrọ ịmalitegharị iPad gị, mana bọtịnụ ike anaghị arụ ọrụ. Broken mkpọchi nwere ike ịbụ nsogbu, mana ọ dabara nke ọma na ị nwere ike ịmalitegharị iPad gị site na iji AssistiveTouch. N'isiokwu a, m ga-egosi gị otú Malitegharịa ekwentị ihe iPad na-enweghị iji ike button .
Ọ bụrụ na iOS 10 arụnyere na iPad gị
Ibidogharịa iPad n’enweghị bọtịnụ ike were nzọụkwụ abụọ ma ọ bụrụ na ọ na-agba iOS 10. Nke mbụ, ị ga-emechi iPad gị, wee jikọọ na isi iyi nke ike site na iji eriri Lightning gị.
Echegbula: ọ bụrụ na iPhone gị agbanyụọ, mana bọtịnụ ike agbajiri, ị nwere ike ịgbanye ya mgbe niile site na ịtinye ya na isi iyi ike ọ bụla dịka ọdụ ụgbọ USB na kọmputa gị, chaja mgbidi, ma ọ bụ chaja ụgbọ ala!
Nke mbu, Gbanye AssistiveTouch
Anyị ga-eji AssistiveTouch ịmalitegharịa iPad gị na-enweghị bọtịnụ ike. AssistiveTouch emepụta na-agbakwụnye bọtịnụ Homelọ mebere na iPad gị, nke na-abata aka mgbe ọ bụla nke bọtịnụ anụ ahụ dị na iPad rapaara, jupụta, ma ọ bụ mebie kpamkpam.
Iji tinye AssistiveTouch mebere Home bọtịnụ gị iPad, na-emeghe Ntọala ngwa, wee pịa General -> Nweta -> AssistiveTouch . Kpatụ mgba ọkụ na-esote AssistiveTouch iji gbanye ya - mgbanwe ahụ ga-agbanwe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mebere Home bọtịnụ ga-egosi na ngosipụta iPhone gị.
Olee otú Iji Malitegharịa ekwentị An iPad agba ọsọ iOS 10
Ka ịmalitegharịa iPad na-enweghị bọtịnụ ike na iOS 10, pịa bọtịnụ AssistiveTouch mebere nke ga emeghe menu AssistiveTouch. Kpatụ ya Ngwaọrụ bọtịnụ, wee pịa ma jide Mkpọchi ihuenyo bọtịnụ dịka ị na-ejikarị na bọtịnụ ike nkịtị na iPad gị.
Mgbe sekọnd ole na ole gasịrị, ị ga-ahụ akara ngosi ike na-acha uhie uhie na okwu 'slide to off off' pụtara n'akụkụ elu nke ngosipụta iPad gị. Mia akara ngosi ike uhie site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji mechie iPad gị.
Ugbu a, iji gbanwee ya, jidere eriri Lightning gị ma jikọọ ya na isi iyi ike ọ bụla dịka ị ga - eme mgbe ị na - akwụ ụgwọ iPad gị. Mgbe sekọnd ole na ole ma ọ bụ minit ole na ole, akara Apple ga-apụta n'etiti ngosipụta iPad gị.
Ọ bụrụ na iOS 11 arụnyere na iPad gị
Ikike ịmalitegharịa iPad na-enweghị bọtịnụ ike agbakwunyere AssistiveTouch mgbe ewepụtara iOS 11. Site na nsụgharị mbụ nke iOS (10 ma ọ bụ okenye), ị na-agbanyụ iPad site na iji AssistiveTouch, wee tinye ya n'ime isi iyi. Usoro a dị ntakịrị ike, yabụ Apple gbakwunyere bọtịnụ ịmalitegharị na AssistiveTouch.
Imelite na iOS 11, na-emeghe Ntọala ngwa na enweta General -> Mmelite ngwanrọ . Ọ bụrụ na mmelite dị na iOS 11 dị, pịa Ibudata na Wụnye . Usoro mmelite nwere ike iwepụta oge iji wuchaa, yabụ nwee ndidi!
Mara: iOS 11 dị ugbu a na beta mode, nke pụtara na ọ nwebeghị ndị ọrụ iPad niile. Ndị ọrụ iPad niile ga-enwe ike ibudata ma wụnye iOS 11 na Fall 2017.
gịnị kpatara chaja m ji ekwu na anaghị akwado ngwa
Etu ị ga-esi malitegharịa iPad na enweghị bọtịnụ ike
Kpatụ AssistiveTouch mebere Home bọtịnụ.
Kpatụ Ngwaọrụ (chọọ akara ngosi iPad ).
Kpatụ Ọzọ (chọọ akara ngosi akara atọ ).
Kpatụ Malitegharịa ekwentị (chọọ triangle n'ime gburugburu ọcha ).
Kpatụ Malitegharịa ekwentị mgbe ị na-ahụ njikere na-ajụ, 'you ji n'aka na ị chọrọ ịmalitegharịa iPad gị?'
IPad gị ga-akwụsị, wee tụgharịa n’ihe dị ka sekọnd iri atọ ka emechara.
Enwere M Ike!
Successfully megharịrị iPad gị nke ọma n'enweghị ike bọtịnụ site na iji AssistiveTouch! Okwu a dị oke nkụda mmụọ, yabụ anyị na-agba gị ume ịkekọrịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta iji chekwaa ndị enyi na ezinụlọ gị otu isi ọwụwa ahụ. Enwere ike ịhapụ anyị ikwu n'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iPhone ma ọ bụ iPad ma, dị ka mgbe niile, daalụ maka ịgụ!